စစ်ကိုင်း၊မုံရွာဘက်မှမြန်မာ့အမွေအနှစ်များနှင့်အံ့သြဘွယ်ရာဖြစ်ရပ်များ။(ဒုတိယပိုင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » စစ်ကိုင်း၊မုံရွာဘက်မှမြန်မာ့အမွေအနှစ်များနှင့်အံ့သြဘွယ်ရာဖြစ်ရပ်များ။(ဒုတိယပိုင်း)
Posted by ba gyi on Jan 30, 2012 in Editor's Choice, Local Guides, Travel | 17 comments
စစ်ကိုင်း၊မုံရွာ ဘက်မှ မြန်မာ့အမွေအနှစ်များနှင့် ၊အံ့သြဘွယ်ရာဖြစ်ရပ်များ။(ဒုတိယပိုင်း)
( ၇. ၀၁. ၂၀၁၂ ) ရက်နေ့မှာ၊၀န်ထမ်း ဆုပေးပွဲပြီးတော့၊ မုံရွာဘက်ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်၊ လမ်းမှာမနေ့ကကျန်တဲ့စစ်ကောင်းကောင်းမှုတော်စေတီတော်ကြီးကိုဝင်ရောက် ဖူးမျှော် ကြည်ညိုခဲ့ပါတယ်၊ လက်ယာရစ်တစ်ပါတ်ပြည့် အောင် ပတ်လျှင် မိခင်ရဲ့နို့တစ်လုံးဘိုးကျေတယ်ဆိုတာလည်ူးကြားခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့သည်ဘုရားပရ၀ုဏ် ထဲဝင်တော့၊ယူနီဖေါင်းဆင်တူရာ ၀တ်ထား တဲ့ လူငယ်အုပ်စုတွေ သုံးစုလောက်တွေ့ရပါတယ် ၊တစ်အုပ်စုအရောင်တစ်မျိုးနဲ့၊မိန်းကလေး၊ယောက်ကျားလေးတွေအများသားပဲ၊ တော်တော်ပျော်ပြီး အော်ကြ ဟစ်ကြ နောက်ကြပြောင်ကြပေါ့၊တစ်ဝင်းလုံး ဆူညံဘွတ် ကလောနေကြတာ၊မေးကြည့်တော့ မန္တလေး၊ဘက်က ဘော်ဒါဆောင်တွေ မှ ကျောင်းသားတွေတဲ့ဗျား။
စစ်ကိုင်း ကောင်းမှုတော်စေတီကြီး ကိုယခင် ဓါတ်ပုံတွေအရ ထုံးဖြူဖြူ သင်္ကန်းကပ်ထားတာတွေ့မြင်နေကျ ဆိုတော့ယခု ရွှေသင်္ကန်းကပ်ထားတော့ မြင်ကွင်း တစ်မျိုးကြီးတော့ဖြစ်သား၊ ဒါပေမည့်လည်း ကြည်ညိုစရာကောင်းပါတယ်ဗျား။
ထုံးဖြူဖြူမှ ရွှေရောင်အတိဖြင့် ကြည်ညိုလှသော၊ကောင်းမှုတော်စေတီတော်ကြီး။
ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးကိုကြည်ညိုကြပြီး၊ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်၊ မြင်းမူမြို့အ၀င် ညောင်ပင်ဝန်း ဆိုတဲ့ ရွာကိုညနေပိုင်း(၃)နာရီလောက်ရောက်ပါတယ်၊ အဲသည်မှာ ထမင်းဆိုင်လေးတွေရှိပြီး၊ ဆိုင်ကြီးတွေ မဟုတ်တဲ့ ဘေးဆိုင်တန်းကလေးတွေမှာ တစ်ခါပြင် ငါးရာကျပ်နဲ့ အဆာပြေ ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုပုံပြီးထည့်ပေးတာ၊ စားရတာ အိမ်ထမင်း၊ အိမ်ဟင်းကလေးစားရတဲ့ တောချက်အရသာ ကလေးပါပဲ၊ ပဲရေပွကြော်၊ငြုပ်သီးတောင့်ကြော်ကလေးနဲ့သရက် သီး အချဉ်လည်းပါသေး၊ဘာစားကောင်းသလည်းမမေးနဲ့၊ အဲဒါ ကျုပ်တို့နဲ့ပါလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က သူများ စားတာ ကြည့်ပြီး၊သရေယို လာလို့ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး အလာ၊ ထမင်းဟင်းပြင်ပေးတဲ့ အဒေါ်ကြီးက ပဲရေပွကြော်၊ ငြုပ်သီးနှင့် သရက်ချဉ်တွေကို လက်ကြီးနဲ့လည်းနှိုက်ထည့်ကရော၊ သည်မောင်မင်းကြီးသား ခဗျာ၊ စိတ်ပျက်ပြီးကား ပေါ်ပြန်ပြေးပါလေရောဗျား။
ဒါကိုကြိုသိလို့ကျုပ်တို့မန်နေးဂျင်းက အဒေါ်ကြီး ဇွန်းနဲ့ထည့်ပေးပါပြောတာ လက်မခံဘူးလေ၊ မကြားချင်ယောင်ဆောင် ဆက်ထည့် သဗျား။ ဒါပေမည့် အစားသောက်တွေကတော့ တော်တော် သပ်သပ် ရပ်ရပ်၊ လပ်ဆတ်ဆတ် သန့်ပါတယ်။ အဲ သူ့ လက်ကတော့ မသိတော့ဘူးဗျာ။ ( စားလို့ကောင်းတာတော့အမှန်ပဲ ဟီး ဟီး။) တစ်ယောက်မှတော့ အီးပမ်းတယ်မကြားမိဘူး၊ ကျုပ်တို့ ဓလေ့နဲ့ ကျုပ်တို့က ဘက်တီးရီးယား အင်မြုံန်းဖြစ်တွား လို့လားမသိပေါ့နော်။
မန်နေးဂျင်းက မန္တလေးသူလေ၊ အဲသည်ဘက်မှာသူရို့ငယ်ငယ်က ခေါင်းရွက်တောသယ်လေးတွေရှိကြောင်း၊ အိမ်ထမင်း/ဟင်းအရသာနဲ့၊သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဈေးပေါချောင်ကောင်းကလေးစားရတဲ့အရသာ ကို ရန်ကုန်သားတွေစားဖူးတယ်ရှိအောင်ဆိုပြီး၊တောသဘာဝလေးဝယ်ကြွေးတာလေ၊ခေါင်းရွက်သည်တွေမရှိရတော့ဘူးဆိုတော့၊ဆိုင်သေးကလေးတွေနဲ့ဖွင့်ကြတာ။
အဲသည်နောက် ညနေ (၄း၀၀)လောက်မှာ မြင်းမူကနေ အနောက်မြောက် ထောင့်ဘက် (၅)မိုင်ကျော်လောက် သွား ပြီးတဲ့အခါ၊ဗောဓိတစ်ထောင် ရှိရာ ခတ္တန် ရွားအနီးရောက်ပါတယ်၊ကြုံချင်တော့၊ ရွာရှင်ပြု မှ ရှင်လောင်းလှည့်လာ တာနဲ့တိုးနေလို့နာရီဝက်ကျော်လောက်ကားရပ်စောင့်လိုက်ရပါသဗျား။
လှည်းယာဉ်ကျော့ကျော့ ပေါ်ပရိက္ခရာရှစ်ပါးသယ်ဆောင်လို့ သာသနာဝါ၀ါဝင်းအောင်ပ— တဲ့။
ကွမ်းတောင်းကိုင် ညိုပြာညက်တွေနဲ့၊ အဲဒါမှ မြန်မာ ဓလေ့ဗျ။
ဗောဓိတစ်ထောင်ရောက်တော့ ညနေ(၅း၃၀) လောက်ရှိပါပြီ၊ ကျုပ်တို့ ဦးဇင်းကြီးက အဲသည်မှာ ကိုယ်ပိုင် တစ်ထပ်တိုက်ကျောင်းကလေးရထားတော့၊သူ့ကျောင်းတိုက်ကလေးမှာပဲ၊တည်းကြပါတယ်။ ဗာဓိတစ်ထောင်ကျောင်းတိုက်ကြီးကအလွန်ကျယ်ဝန်းလှပြီး၊ ဆရာတော်သီတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းအပြင်၊ကိုယ်ပိုင်လှုထားတဲ့ တိုက်ကျောင်းကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်၊ ဘုရားဖူးတွေတည်းခိုဘို့ တိုက်အဆောင်ကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်၊ ခေါင်းအုံး၊ခြင်ထောင်၊စောင်၊အိပ်ယာခင်း၊ဖျာ မှအစ၊ ရေချိုးခန်း၊အိမ်သာ အားလုံးကို လိုလေးသေးမရှိ သန်းသန့်ပြန့်ပြန့် စီစဉ်ပေးထားပါသဗျား။
လျှပ်စစ်မီး၊ရေကအစပြည့်စုံစေရန်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်၊ တောင်ပေါ်ဘုရားဖူးရန်လည်း၊အုတ်လှေခါးတွေရှိသလို၊ဆိုင်ကယ်တွေ၊ကားတွေပါထားရှိပါတယ်။အဲသည်မှာ အညာ သနပ်ခါးတန်းဆိုင်ကလေး ကိုတောင်ခြေမှစလို့တောက် ရှောက် တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အထိတွေ့နိုင်ပြီး၊သနပ်ခါး အတုလုံးဝရောင်းခွင့်မရှိပဲ၊ဆရာတော်တွေစစ်လို့တွေ့လျှင်သက်သေပြအတိုင်ခံရလျှင် ၊ရောင်းခွင့်လုံးဝပိတ်ပစ်ပြီးနှင် ထုတ်ခံရပါသတဲ့၊ ကဲ စံနစ် ကောင်းလိုက်ပုံများဗျာ။ကိုယ်ပိုင်ရေလှေင်ကန်၊ဆည်အသေးလေးတွေလည်းတည်ဆောက်ထားပြီး၊ပိုက်လိုင်းတွေနဲ့ရွာကိုပါဖြန့်ပေးပါတယ်။
လျှပ်စစ်မီးလည်းရှိပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးနှင့် တပည့်သာဝက များ၏၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ကောင်းပုံပါပဲ။ အဲသည်ညမှာညစာကိုတော့ ဆရာဦးဇင်းကြီး ဘိုကင်လုပ်ပေးထားတဲ့ ကျောင်းဝင်းရှေ့မှ ရာမည ထမင်းဆိုင် ကလေးမှာစားကြပါတယ်၊ကြက် သောက်ဆမ်း တောချက်ကလေးကို ခွေးတောက်ရွက်နဲ့ရောချက်ထားတာ၊ အညာငရုပ်သီးစိမ်း ထောင်းက လေး ကလည်း မွှေးပြီးရှာလည်ပါ့ဗျား၊ အညာခရမ်းချဉ်သီး ပန်ထွေဖျော်ကလေးလည်းမလွတ်စေရပါဘူး၊ လူတစ်ယောက် ဟင်း ပုဂံ တစ်လုံးစီနဲ့ ကြက်သားကာလသားဟင်း၊ကြိုက်သလောက်စားနိုင်တယ်၊ဆိုင်ရှင်တွေကဖေါ်ရွေပြီး၊မညီးမငြူ
ဟင်း၊ ထမင်းတွေလိုက်ပေးကြသဗျား၊ အရံဟင်းတွေလည်းစုံလှ၊ မြင်းခွါရွက်သုတ်၊သရက်ချဉ်သုတ်၊ကန်စွန်းရွက်ကြော်၊ မျှစ်ကြော်၊ပဲရေပွကြော်၊ ဟော အတို့အမြှုပ် ကလည်း အရှံပယ်ပေါ့ ၊ရေစင်စင် ဆေးထားပြီးတစ်ပွင့်ချင်းချွေထားတဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီပွင့်က ကိုက်ဝါးလိုက်ရင်တစ်ဂျွမ်း၈ျွမ်းနဲ့၊ ရှောက်ရွက် နုနုစိမ်းကလေးတွေကလည်းကြွပ်ပြီးမွှေးတေးတေး၊ သခွါးသီး လည်းမက၊ သင်္ဘောသီးအနုလည်းမဟုတ်၊လက်သီးစုပ်မရှိတရှိ (လေးစိတ်စိပ်) ထားတဲ့အသီးလေးတစ်စိပ် ယူပြီးဝါးကြည့်လိုက်တာ ချွမ်းကနဲ ရွှပ်းကနဲ၊အရသာကလည်းချိုမွှေးအေး နဲ့ နှစ်လုံးလောက်ကုန်သွားတယ်၊ တစ်ခြားဝိုင်းတွေက လည်းအဲသည့်အသီး ကိုထပ်တောင်း ကြတော့၊ သိချင်စိတ်မအောင့်နိုင်ဘဲ မေးကြည့်တာ၊ အဲဒါ နိုင်ငံခြားပို့တဲ့စိုက်ခင်းတွေ မှာ စိုက်တဲ့ သခွါမွှေး အနုလေးတွေတဲ့ဗျား။
စိုက်ခင်မှာ သခွါမွှေးတွေသီးရင် ခေါင် အကောင်းဆုးံအလုံးသာရွေးထားပြီး၊ကျန်တဲ့ အသီးတွေကိုခူးပြီးပြန်ရောင်းသတဲ့၊ကဲ– ကြုံရင်ဝင်စားကြဘို့ လမ်းညွှန်ပါရဲ့ဗျား။ အ၀စားတော့ ကျပ်နှစ်ထောင်တဲ့နော်၊ ဒါပေမည့်မတန်ဘူးလို့ကိုမထင်ခဲ့ပါ။
အဲသည်ညမှာ အဖွဲ့သားတွေ တစ်ညတာအိပ်စက်အနားယူကြပြီး၊ နောက်နေ့ (၈. ၀၁ .၂၀၁၂)နံက် (၄း၃၀)နာရီမှာ-ညီညာထကြလို့ ဗောဓိတစ်ထောင် ကျောင်းဝင်းမှာသီတင်းသုံးကြတဲ့ သံင်္ဃာ တော်များကို ၊ကျနော်တို့အဖွဲ့ မှ အာရုံဏ်နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲကပ်လှုကြပါတယ်။အလှုငွေလှုရုံပါပဲ ၊ကျောင်းတိုက်ဥပသာက တွေကအားလုံးစီစဉ်ပေးပါတယ်။ ရွာသားများကိုကောင်းအမျှပေးဝေပါတယ်ခင်ဗျား။
(၈. ၀၁ .၂၀၁၂)နံက် (၇း၃၀)မှာ- ဗောဓိတစ်ထောင်ကျောင်ဝင်းမှသည် ၊ မုံရွာအထွက် ကြေးနီတောင်ဘက်မှမြန်မာ့သမိုင်းအမွေအနှစ်များရှိရာ ရွှေဘတောင် နဲ့ ဖိုးဝင်းတောင် သို့ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါသည်။
ရွှေဘတောင် နှင့်ဖိုးဝင်းတောင်သည်၊မုံရွာအနောက်ဘက် ၊ကြေးနီတောင်ဘက်သွားရာ ပုသိမ်/ မုံရွာလမ်း ပေါ်တွင် တည်ရှိ၏၊ပင်မလမ်းမကြီးမှခွဲထွက်ကာ၊သဘာဝတောတန်းကလေးထဲမောင်းဝင်သွားရပြီး၊ ကျနော်တို့အဖွဲ့က ရွှေဘ တောင်ကိုအရင်ဝင်ကြပြီးမှ ဖိုးဝင်းတောင်ကိုသွားပါသည်။
ရွှေဘတောင်ဟုအမည်တွင်ရခြင်းမှာ၊ ပုဂံခေတ် အလောင်းစည်သူလက်ထက်၊ကျောက်ထွင်းအနုပညာဆရာကြီး ဦးရွှေဘ မှ ထိုတောင်တွင် ၊ကျောက်နံရံများကိုထွင်းထားသောရုပ်ထုများ၊ကျောက်ဂူများ၊ ဘုရားပုံတော်များနှင့်၊ ကျောက်တောင်ကိုထွင်းပြီးလူသွားလမ်းဖေါက်လုပ်ထားသောတောင်ကဗားရံလမ်းများ ကိုလက်ရာမြောက်စွာ ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှ ရွှေဘတောင်ဟု အမည်တွင်ပါသတတ်။ (ရုပ်ရှင်မင်းသားရွှေဘနှင့်ဘာမှမဆိုင်ချေ။) တောင်အမြင့်နှင့်အကျယ်မှာ နာရီဝက်လောက်သွားစရာသာဖြစ်သော်လည်း ၊ကျောက်ခင်းကျောက် ထရံများ အကြား၊ ကျောက်ဂူကျောက်ထပ် များအကြားဝင်သွား ရ သည်မှာအရသာတစ်မျိုးပင်၊တစ်ကယ်တော့ လူထွင်းပြီးဖန်ဆင်း ထား သော ကျောက်တောင်ကျောက်တုံးရုပ်စုံတောကြီးထဲ ထူးထူးဆန်းဆန်းရောက်နေသလိုပင်ဖြစ်ပါသည်။
ရွှေဘတောင်မှပြန်အထွက်၊ဖိုးဝင်းတောင်သို့အသွားလမ်းတစ်နေရာတွင် ကားဆရာကြီးပြောပြချက်အရ၊ ကမန်း ကတန်းဓါတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်၊ သဘာဝတည်နေသောတောင် တန်း ကလေးဖြစ်သော် လည်း၊မြတ်စွာဘုရားပက်လက် လည်းလျှောင်းတော်မူနေသောပုံတော်ကဲ့သို့တစ်ထေရာတည်းတူနေသည်မှာ အလွန်အံသြစရာပါပေ။
အဲသည်နောက်တော့၊ရွှေဘတောင်မှသည် ဇော်ဂျီ ဦးဖိုးဝင်းတို့ သားအဖရဲ့ကြေကွဲစရာသမိုင်းဇတ်လမ်း နှင့် ဗောဓိတစ်ထောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏၊အံချီးဘွယ်ရာများကိုဆက်လက်လေ့လာခဲ့ရပါသည်။
ကိုယ်မသိတဲ့နေရာတွေ.အကြောင်းအရာတွေ မကုန်နိုင်အောင်ပဲ တယ်များပါလား ဘကြီးရဲ့
ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပေးရှင်းပြပေး အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း
ဘယ်သိမလဲ ညီးက တစ်နေ့တစ်နေ့ ၀က်ခေါက်ဆိုင်ထဲက မထွက်ဘဲနဲ့
ဆိုင်လာသမျှ တောင်လေးတွေဘဲ ငမ်းနေတာကိုး
မပြောချင်ဘူး မိပေါက် အမွှေးနှုတ်ပြီး ကင်စားလိုက်မယ်
ဘဂျီးရယ် ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်တာများ နှမြောပုံပေါက်တယ် ၊ ရွာထဲက ဆြာတွေသာ ဘဂျီးလို သွားခဲ့ရရင် ၊ ပုံတွေအများကြီး ဝေဆာနေအောင် တင်မှာ မြင်မိတယ် ။ စကားမစပ်..ရှိသေးရင် ထပ်တင်ပေးပါဦး ။ ကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်သေးတော့ ၊ ဘဂျီးပုံတွေနဲ့ အရင်ဂိုးမယ်ဗျာ ။
မောင်ပေရယ်…။ မန္တလေးနဲ့ နီးနီးလေးဟာ….။ သွားလို့ရသားပဲ…။ နင့်ဖာသာနင် လောဘကြီးပြီး ပွဲစားအလုပ်ရပ်ထားရမှားစိုးပြီး မသွားတာများ …။ ဘောလုံးပွဲကလည်း ရပ်ထားလို့ မရဘူးမဟုတ်လား ဟင်းးးးးး မသိတာကျလို့ …………။
ကျနော့မှာလည်း အဖွဲသားကောင်မကလေးတွေကင်မရာမေ့ကျန်ခဲ့လို့ဆို ၊သူရို့ပုံတွေရိုက်ပေးရတာနဲ့၊ကိုယ့်
မှတ်တမ်းတွေနဲသွားရပါသဗျား။တစ်ခါဘက်ထရီကကုန်သွားသေး၊မှတ်ကရောပါပဲ ကွယ်ရို့၊တစ်ခါတစ် ခါရောက် ဘို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး၊အဟုတ်ကိုပါပဲ၊ နို့ပေမည့် ရှိသမျှတော့ တင်ပေးပါအုန်းမယ်ခင်ဗျား။
အောက်ဆုံးက ပြန်ကြည့်ရင် ဒုတိယ စေတီပုံက
ဆင်ရုပ်တွေပေါ်မှာ တည်ထားတယ် ထင်တယ်နော်။
ဆင်ဦးကင်းထိပ်မှာ၊ဘာဧက္ခရာလည်းမသိ၊ အင်းစာလုံးလိုလိုပါပဲ။အားပေးသွားတာကျေးဇူးပါ။ကိုဘလက်ရဲ့ ကင်မရာလက်စွမ်းတော့မမှီသေးပါခင်ဗျား။
တကယ်ဗဟုသုတရတယ် …. ကျွန်တော် မရောက်ဘူးသေးဘူး.. မြန်မာ့ဓလေ့ အလှူပွဲနဲ. ………
သဘာဝ ကျောက်တောင်တွေ ရှိတယ်လို.ကို သိမထားတာ…
မြန်မာ့ရိုးရာ စစ်စစ်တွေ နယ်တွေမှာဘဲတွေ့နိုင်တော့တယ်နော်..
တင်ပြပေးတဲ့ ဘဂျီး ကိုကျေးဇူးပါဗျာ..
koyinmaung,Ko Shwe Tike Soe,Ko kyeemite တုိ့အားပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျား၊ မြန်မာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေ၊ကျနော်တို့မသိတာအများကြီးပါဗျား၊ သက်ဆိုင်ရာမှ အဖိုးတန် အမွေအနှစ်တွေ ဖေါ်ထုတ်ပြီး၊ကဗ္ဘာသိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်၊မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ၊သမိုင်းလေ့လာသူတွေ၊ယာဉ်ကျေးမှုလေ့လာသူတွေရဲ့ တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်သောကဗ္ဘာ့ အမွေအနှစ်နယ်
မြေ ဖြစ်မှာပါပဲ၊နိုင်ငံတစ်ကာမှလည်း လေ့လာသူတွေ ၀င်လာမစဲ တစ်သဲသဲ ဖြစ်မှာပါဗျား။
ကျေးဇူးပြုပီး ဖတ်ကြသူမိတ်ဆွေများခင်ဗျား၊ ရွှေဘတောင် ဟုအမည်တွင်ရခြင်းမှာဆိုသော စာကြောင်းတွင်
ပုဂံ ဘုရင် အလောင်းစည်သူလက်ထက် အစား(နရပတိစည်သူမင်း)ဟုအစားထိုးဖတ်ပါရန် လေးစားစွာ
စစ်ကိုင်းကိုရောက်ပေမယ့် မရောက်ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေအကြောင်း သိရတော့ ၀မ်းသာကြည်နူးမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုသိမ်မုံရွာ ကားလမ်းဘေးနားက လက်ပတောင်းတောင်ကြီးတရုတ်လက်ထဲရောက်တယ် ကြားတော့ ရင်နာမိတယ် ……….ငါတို့ရဲ့အသွေးအသားတွေ ထုတ်ပီး အရောင်းစားခံနေရပီလား………………………………………
ဘကြီးရေ – မရောက်ဘူးတဲ့ နေရာတွေ ရောက်သမို့ ကျေးဇူးပါနော်။
ကျွန်မလဲ စစ်ကိုင်း ကောင်းမှုတော်စေတီကြီး ကို ထုံးအဖြူတွေ နဲ့ဘဲ ဖူးဘူးပါတယ်။
မြန်မာ့ ဓလေ့လေးတွေ ဆက်ရှိနေတာ တွေ့တော့ ဝမ်းသာရပါတယ်။
မောင်ရင်လောင်း လေးတွေ က ချစ်စရာလေး။
ဒါပေသည့် ဘကြီး ရာ – စားစရာတွေ တော့ရိုက်မလာဘူး။ ;-)
အတင်းလွေး နေရလို့ မှတ်တမ်းတင်ရန် မေ့သွားတယ်ထင်ပါ့။
ဆက်ပြီး ဗဟုသုတလေးတွေ ဝေမျှပါဦးနော်။
Wai Phyo ရေ တရုတ်လက်ထဲရောက်နေတာတွေကတော့၊ အများကြီးပါပဲ၊လက်ညိုးထိုးရောင်း စားခဲ့ကြတာ ကိုး၊ဘာပညာမှမတတ်တော့ ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်ထုတ်ရောင်းစားရတာဝမ်းနဲစရာပါ။
tree, နှင့် Daw Khin Latt အလည်လာပေးလို့ကျေးဇူးပါဗျား၊ အစားအစာတွေကစားကောင်းနေတော့ ရွာမှ
ဆွေမျိုးများကိုမေ့သွားမိလို့ ခွင့်လွှတ်ပါဗျား။နောက်ဆိုသည်လိုစားကောင်း တာလေးတွေကြုံရင် သတိယ ပါ့မယ်။
ဟုတ်ပါရဲ့ ဗျာ အကြီးအကဲတွေပညာမရှိ ဦးနှောက်မရှိခဲ့လို့ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတာ ဘကြီးရေ…..ပြည်သူတွေအသိအမှောင်ချခံခြင်းမှလွတ်မြောက်ပါစေဗျာ…………….
Wai Phyo ရေ၊ လွတ်မြောက်ကြတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ၊ ဦးသိန်းစိန်တို့လို တိုင်းပြည်အပေါ်စေတနာထားနိုင် တဲ့ လူတွေ များလာတဲ့အခါမျိုး နဲ့ အန်တီစုတို့လို ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပူး ပေါင်းနိုင်ကြပြီးရင်ပေါ့။ ပါတီမတူပေမည့် တိုင်းပြည်၊လူထုအပေါ်စေတနာနဲ့လုပ်ရပ်တစ်ထပ်တည်းကျသွားရင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို ကျပ်တို့ပြည်သူတွေမှာ သားရွှေအိုးထမ်းလာတဲ့ ကိန်းရောက်ပါပြီ။ ဆုတောင်းပေးကြပါ။လေးစားစွာဖြင့်။